Kwezemidlalo: Nangu uDumo Mkhwananzi Oncintisa Kwezokugijima
Dumo Mkhwananzi (ophakathi laphakathi) esemukela umvuzo wakhe ngemva komncintiswano we Old Mutual Nkulumane Fun Run.
UDumo Mkhwananzi ngumdlali osakhulayo ogijimela iqembu le Sparrows njalo ngenyanga kaMabasa ubengomunye wabadlali abamele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weWorld Cross Country Championships oqhutshelwe elizweni leUganda.
Bekungokwakuqala ukuba lumdlali aphatheke kumjaho ongenwe ngamazwe wonke omhlaba njalo uqhube kanzima ndawonye labanye abadlali bakwele Zimbabwe abaphatheke kulumncintiswano abagoqela uWellington Varevi kanye lo Rudo Mhonderwa bona abagijime kumncintiswano we senior men’s lowe senior women kanye lo Dzidzai Gumede ogijime kumjaho wabasakhulayo kucele labesifazane kuthi yena uMkhwananzi ugijime kumncintiswano wabafana abasakhulayo.
“Ngike ngayamela ilizwe ngenyanga kaMabasa edolobheni leKampala elizweni le Uganda njalo njengomuntu obeqala ukuphatheka kumncintiswano lo ngenze konke okusemandleni ami ngaphutsha ngikundawo yamatshumi ayithoba munwe munye.”
UMkhwananzi ukhethwe ukuyamela ilizwe le Zimbabwe ngemva kokuba enqobe kumncintiswano we National Cross Country oqhutshelwe edolobheni lako Bulawayo ekuqaleni komnyaka njalo uthi kumele aqine ngokuzilolonga ukuze aqhube kuhle kumncintiswano ezayo.
“Ukuze kube lengqubela phambili ekugijimeni kwami kumele ngiyale ngilokhu ngizilolonga njalo ngigxile kumijaho ephakathi laphakathi eye middle distance okuyiyo engivele ngithanda ukuphatheka kuyo.”
Ensukwini ezedluleyo uMkhwananzi nguye onqobe kumjaho wamajaha asakhulayo kumncintiswano we Old Mutual Nkulumane Fun Run kuthi kumncintiswano wonke jikelele obuphakathi kwamakhilomitha alitshumi uphutshe ekundawo yethoba munwe munye.